Liis: SOMALIA oo ka mid noqotay 10-ka dal ee lagu dhibaateeyo dumarka - Caasimada Online
Home Nolosha Liis: SOMALIA oo ka mid noqotay 10-ka dal ee lagu dhibaateeyo dumarka
Liis: SOMALIA oo ka mid noqotay 10-ka dal ee lagu dhibaateeyo dumarka
Dumarka oo ah halbowlaha Bulsho walba kana mid ah berimageedada ayaa waxa ay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo intooda badan kaga yimaada rabshadaha iyo dalalka ay colaadaha ay kajiraan.
Hadaba Sahan ay shaaca ka qaaday warbaahinta Thomson Reuters Foundation ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay kamid tahay wadamada ugu horeeya caalamka ee dumarka Lagu dhibaato waxaana ay kaga jirtaa kaalinta 4-aad.
550 Khubarro oo daraasadani sameeyay ayaa si aad ah ugu kuur galay arimaha dumarka iyo sida ay ugu noolyihiin dalalkooda iyagoo baaritaan ku sameynaya tacadiyada ay la kulmaan haweenka sida: heerka kufsiga, Tacadiyada galmada Faquuqa shaqada, guurka qasabka ah , heerka dilka, faquuq dhanka dhaqanka , addoonsiga, dhibaatoyinka qoys-ka, helitaanka fursadaha nolosha muhiimka u ah sida Dhaqaalaha,Waxbarashada, daryeel Caafimaadka, Dhaqanada soo jireenka ah, iyo ka gancsiga dumarka.
Hadaba10 dal oo dhaca Qaaradaha Asia, Africa, Iyo America ayaa noqday wadamada ugu halista badan ee dumar ku noolyiin::
1 – INDIA – Waa dalka ugu horeeyay marka loo eego tacadiyada ka dhanka ah dumarka dhowr sano oo la soo dhafay xitaa dalka India waxa uu ahaa wadanka ugu halista badan hablaha ku noolyihiin , dowladda India waxa ay ku celcelisay in ay ka hortageyso balse wali waa sidiisii, waxeyna ugu sii xumeyd markii Magaalada New Delhi shan rag ah ay Bus ku dhex kufsadeen gabar ardayad ah oo markii dambena u geyriyootay kufsigaas, caro weyn ayaana ka dhalatay shacabkana waxa ay ku kaceen dowladda.
Haweenka Hindiya waxa ay la kulmaan tacaddiyo dhanka galmada ah, faquuq dhaqanka ah, addoonsi iyo dhibaatoyinka qoys.
2 – AFGHANISTAN – kaalinta Labaad waxaa kujira dalkan Afghanistan waxaana Khubaradu ay sheegen in dumarka ku nool dalkan ay heysato dhibaato ku daba dheraatay oo ay la kulmayaan 17 sano tan iyo markii Talibanka Afghanistan ay dalkaasi dagaalada ka bilaabeen, waxaa na ay la kulmaan Dagaalka aan galmoodka ahayn sida Caafimaadka iyo ilaha dhaqaalaha.
3 – SYRIA – Dalka Syria waxa uu dagaal ka socdaa Todoba sano waxaana uu kamid yahay dalalka ugu Khatarta badan ee dumarka ku noolyihiin waxaa ku adag helidda adeegyada caafimaadka, iyagoo sidoo kale wajaha kufsi iyo dagaalo wada socda.
4 – SOMALIA – Kaalinta Afaraad waxaa kujira dalka Soomaaliya oo dagaalo sokeeye ay ka qarxeen 1991-dii, waxaa dumarka ay la kulmaan kufsi iyo dil waxaana ku adag ineey helaan daryeel caafimaad , iyo fursado shaqo, waxaa sidoo kale dhib ku haya dumarka Soomaaliyeed Caadooyin iyo dhaqamo soo jireen ah, waxaase si gaar ah Soomaaliya ay uga mid noqotay dalalka ugu xun ee dumar dhaqaale ka sameeyaan.
Waxaa dhif iyo nadir ah in Cadaaladda la horkeeno qofka dhibaato u geysta Dumarka ku nool Soomaaliya.
5 – SAUDI ARABIA – Boqortooyada Sacuudiga waxaa lagu dhaliilaa in dumarka aysan u ogalaan goobaha shaqada waxaana ay la kulmaan faquud, sidaas ay tahyna waxaa u dheer in dumarka Sacuudiga ay wajahaan dhibaatooyin dhanka dhaqanka iyo xuquudooda oo la dafiro.
6 – PAKISTAN – Wadanka lixaad oo ah Pakaistan waxa uu sidoo kale yahay wadanka Afaraad ee dumarkooda aysan sameyn dhaqaalaha xitaa waxa ay wajahaan dumarka Pakistaniyiinta dhibaatooyin kaga yimaada dhanka dhaqanka, galmo sharci darro ah, iyo dil la yiraahdo (dil sharafeed) oo dumarka reer Pakistan la kulmaan.
7 – Jamhuuriyadda Dimuquraadiga Congo – Iyadoo Qaramada Midoobay ay ka digtay xaaladaha halista ah ay ku noolyihiin Malaayiin u dhashay dalka Jamhuuriyadda Dimuquraadiga Congo ayaa sidoo kale waxa ay kaalinta 7-aad ka galeen wadamada ugu halista badan ee dumar ku noolyoyiin ee la kulma rabshadaha kufsiga waxaana sabab u ah sharciga oo la iska indha tiro iyo xaaladaha nololeed oo ay ku jiraan..
8 – YEMEN – Dalka Yeman oo 22 Million oo qof ay ku heysato xaalado bini’aadanimo oo halis ah ayaa hadane waxaa lagu dhibaateeyaa dumarka ku nool oo wajaha kufsi iyo daryeel la’aan waxaana intaas u dheer caadooyin dhaqan ah oo dumarka Yeman dhibaato ku haya.
9 – NIGERIA – Kooxda Boko Haram oo Sagaal sano dagaal kawada dalka Nigeria ayaa geysata afduub wadareed ka dhan ah dumarka iyagoo xoog ku guursanaya waxaase dumarka Nageria ugu sii darsamay Militery-ga dalkaasi oo jirdil iyo kufsi u geysta iyadoo aysan meesha ka marneyn ka ganacsiga hablaha ku nool Nageria oo dalal kale loo dhoofiyo sida Ruushka oo kale .
10 – UNITED STATES – Dalka ugu dambeeya oo Ah Mareykanka waxa uu noqday dalka kaliya ee 10-ka dal kaga yimaada dalalka Reer Galbeedka, dumarka American-ka ah ah waxa ay la kulma dhibaatooyin dhanka kufsiga, tacaddiyada galmada iyo inay caddalaadda heli waayeen dumarka la kufsaday.